Taa na zingtụnanya ngwa maka gam akporo Auto Pilot Mode | Gam akporosis
Mgbe ụbọchị ole na ole na-enweghị ngalaba nke ngwa dị egwu maka gam akporotaa anyi laghachị azụ ike karia mgbe ọ bụla na-ewetara gị a free ngwa maka gam akporo nke ahụ ga - enyere anyị aka ịchekwa batrị nke ndị Android anyị hụrụ n’anya na ogologo ntachi obi.
Ngwa ma ọ bụ ngwa maka gam akporo, aga m ekwu, a na-akpọ ya Nchekwa onwe Pilot Mode na anyị nwere ike ibudata ya kpamkpam na nwere ụlọ ahịa ngwa ngwa maka gam akporo el Playlọ Ahịa Google.
Kedu ihe Ọnọdụ Pilot Auto na-enye anyị?
Nchekwa onwe Pilot Mode kwesiri ibu na nkebi nke a ngwa dị egwu maka gam akporo ebe ọ bụ ngwa nke ga - enyere anyị aka ịchekwa ọtụtụ batrị na ngwụcha ngwanrọ gam akporo anyị, ọkachasị maka ndị niile, dịka sava, na - agagharị na mpaghara ebe anyị nwere ọdịda mkpuchi mgbe niile nke netwọkụ ekwentị.
Nchekwa onwe Pilto na ọnọdụ ihe ọ na-eme bụ, mgbe akara ekwentị mkpanaaka adịghị adị ma ọ bụ rute mpaghara ebe anyị na gam akporo anyị esighi ike, ihe ngwa a na-eme bụ mee ka ọnọdụ ikuku rụọ ọrụ ya na ntaramahụhụ batrị nke ama anyị.
Ngwa ahụ n'onwe ya ga-aga achọpụta onye ọ bụla ceroge ma ọ bụrụ na mgbaama dị ọzọ Ikwupu na mbụ jikọọ ụgbọelu mode ọzọ. Site na nke a anyị na-enweta nchekwa batrị n'ihi eziokwu ahụ na njedebe anyị anaghị achọ mgbe niile ihe mgbaàmà ekwentị mkpanaaka, nke bụ otu n'ime ihe na-eji batrị kachasị na njedebe gam akporo.
Ewezuga ijikọ ọnọdụ ụgbọ elu, Nchekwa onwe Pilot Mode na-enye anyị nhọrọ sitere na ntọala ngwa iji rụọ ọrụ nke ọma WiFi site na njedebe Android anyị. Nke a bara ezigbo uru, dịka ọmụmaatụ, maka ndị ọrụ dịka mụ onwe m bi na mpaghara na-enweghị mkpuchi ekwentị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Amazing Android ngwa: Taa Auto Pilot Mode
WhatsApp na-aga n'ihu na-eduga ọrụ ozi ngwa ngwa, ọ bụ ezie na ndị ya na ya na-aga n'ihu na-eto. Kedu ihe nwere ike ịbụ n'ihi nke a?